एक्स्पोले झनै उत्साहित बनाएको छ
यस पटकको फर्नेक्स मेला अवलोकन गर्नुपर्ने विशेष के छ ?
विशेषभन्दा पनि सेवाग्राहीको चासो फर्निचरका उत्पादनमा कति छ भन्ने विषयले धेरै महत्व राख्छ जस्तो लाग्छ । पछिल्लो समय फर्निचरका उत्पादनप्रति आमनागरिकको चासो अनि यसको प्रयोग बढ्दै गइरहेको अवस्था देखिन्छ । आधुनिक शैलीका उत्पादन परिष्कृत संस्करणमा आउने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा के–कस्ता नयाँ उत्पादन आइरहेका छन् भन्ने जान्नका लागि उचित गन्तव्य फर्नेक्स मेला हुनेमा हामी आशावादी छौं । गत वर्षको एक्स्पोमा प्रदर्शनीमा राखिएका उत्पादनभन्दा यस पटक पक्कै पनि अझै आधुनिक उत्पादनहरू प्रदर्शनीमा राखिने निश्चित छ । जसले गर्दा म यो भन्न सक्छु कि यसपटकको मेलामा राखिने हरेक उत्पादन अवलोकनकर्ताका लागि खास हुनेछन् । मौलिक तथा परम्परागत फर्निचरका साथै आधुनिक शैलीका फर्निचरका उत्पादनका बारेमा जानकारी लिन सेवाग्राहीलाई एक्स्पो उचित गन्तव्य हुनेमा म विश्वस्त छु ।
एक्स्पो आउन केही समयमात्र बाँकी छ, तयारी कहाँ पुग्यो ?
फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पोको झन्डै सबै तयारी पूरा भएको छ । भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनीस्थलको भौतिक तयारीबाहेकको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । भदौ २५ गतेदेखि सातौं संस्करणको फर्नेक्स–२०१९ सुरु हुने हो । अझै केही दिन बाँकी भएकाले भौतिक तयारी एक्स्पोका बेला हुन्छ । के भन्न चाहन्छु भने विगत वर्षहरूको अनुभवका आधारमा यस पटक भौतिक तयारी पनि व्यवस्थित रूपमा हुनेछ । हामीले सूक्ष्म विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर मेलामा आउने अवलोकनकर्ताको ध्यान खिच्ने जमर्को गरेका छौं, जसले फर्निचरको प्रयोगलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै बजार विस्तारमा मेलाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।
यस पटकको मेलामा के–कस्ता उत्पादनलाई समेट्नु भएको छ ?
बढ्दो आधुनिक जीवनशैलीसँगै बढ्दै गएको इन्टेरियर डिजाइनका लागि एक्स्पो उचित गन्तव्य हुनेछ । किचन, बेडरुम, बाथरुमका साथै आउटडोर फर्निचर, इन्टेरियर डिजाइनर, कार्पेट, मार्बललगायत सामग्री प्रदर्शनीको मुख्य आकर्षण बन्नेछ । त्यसैगरी कार्पेट, पर्दा, म्याट्रेस, डेकोरेसन सामग्री, होम डेकोर, अफिस फर्निचर, होम अप्लाइन्सेज, मेसिनरी औजारका साथै वस्तुसँग सम्बन्धित उत्पादन प्रदर्शनीको केन्द्रमा पर्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
फर्नेक्स–२०१९ लाई जेम फ्लोरिङले शीर्ष प्रायोजन गरेको छ भने मुख्य प्रायोजकमा हेरिटेज फ्लोरिङ कार्पेट इन्डस्ट्रिज प्रालि, हाइटेक्स कार्पेट र जेन्सा कार्पेट रहेका छन् । एक्स्पोलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले समर्थन गरेका छन् । यसैगरी यस एक्स्पोलाई नेपाल हस्तकला महासंघ र नेपाल इन्टेरियर डिजाइनर एसोसिएसनले सहयोग गरेका छन् । उल्लिखित सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रदर्शकहरूको जमघट एकै छानामुनि हुने भएकाले पनि विधागत रूपमा धेरै किसिमका उत्पादनको प्रदर्शनी मेलामा हुनेछ ।
मेलाबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
नेपालमा उपलब्ध फर्निचर तथा फर्निसिङका उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१२ देखि नियमित रूपमा एक्स्पोको आयोजना सुरु भएको हो । हामी फर्निचरमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अघि बढेको सन्दर्भमा बर्सेनि आयोजना हुँदै आएको मेलाले पक्कै पनि अर्को इटा थप्ने छ । यसका लागि मेला अवलोकन गरिदिन तथा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिदिन आमउपभोक्तालाई आग्रह गर्दछु । फर्निसिङ व्यवसायमा आधुनिक प्रविधि भिœयाउनका लागि पनि मेलाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसले पनि फर्निचरजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन टेवा पु-याउने अपेक्षा छ । यसका साथै प्रदर्शनीले फर्निचरको प्रदर्शनीमात्र नगरी त्यसको उपयोगिता, प्रयोग विधि, बनोटका बारेमा पनि अवलोकनकर्तालाई जानकारी गराउने भएकाले फर्निचरजन्य उत्पादनका प्रयोगकर्तासँग व्यवसायीको सामिप्यता बढ्ने निश्चित छ । यसले व्यवसायको आकारसँगै बजार विस्तारमा टेवा पु-याउने कुरामा दुईमत छैन ।
यसपटकको मेलामा कति प्रदर्शक सहभागी छन् ?
भदौ २५ गतेदेखि ५ दिनसम्म चल्ले एक्स्पोमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १ सय २० हाराहारीमा फर्निचर र फर्निसिङजन्य सामग्रीका स्टल रहनेछन् । छिमेकी मुलुकबाट पनि प्रदर्शकहरूले एक्स्पोमा सहभागिता जनाउनेछन् । बर्सेनि एक्स्पोको दायरा बढ्दै गइरहेको छ । यसले हामी आगामी वर्षमा अझै परिष्कृत शैलीमा एक्स्पो गर्न सक्छौं जस्तो मलाई लाग्छ ।